Astrology Archives - KSM Global
သင့် ရဲ့ ညာ လက်ဖဝါး ကို ဖြန့်ကြည့် လိုက်ရ အောင်နံပါတ် ဘယ် ‌လောက်လဲ? ခုပဲ သင့် ရဲ့ ညာလက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကြည့် လိုက်ရအောင်.. နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ.. ခုပဲ ညာလက်ဖဝါးနဲ့ အဖြေရှာ ရအောင် ကိုယ့်ရဲ့လက်ဖဝါးကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်နော် ၁။ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသောသူ၊ ခေါင်းမာသောသူ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားပြီး ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို လေးစား အားကိုးခံရမည့်သူပါ။ မမှားကိုနည်းအောင် ကြိုးစားနိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေမှာပါ ဒါပင်မဲ့ နည်းနည်းခေါင်းမာသူဖြစ်ပြီး အများအတွက်ထက် ကိုယ့်အ တွက်ကို ကြည့်ပြီး အလုပ်လုပ်တတ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတွက်ထက် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုလည်း စဉ်းစားတတ်ပါစေ ၂။ ရိုးသားပြီး ယုံကြည်ရသောသူ၊ လူစိမ်းကို ယုံလွယ် သောသူ […]
အသားလှုပ်နိမိတ် အဟောများ ၁။ ဦးခေါင်းအရှေ့ပိုင်း ။ ။ မျှော်လင့်ထားသော ကြံစည်ထားသော ကိစ္စရပ်များ အောင်မြင်ပြီး မြောက်စေခြင်း ၂။ နောက်ပိုင်း ။ ။ ကောင်းသာခရီး ပျော်ရွှင်စရာခရီး သွားလာရခြင် း၃။ နဖူးပြင်အလယ် ။ ။ ငွေကုန်ကြေး ကျများခြင်း ရင်းနှီးမတည်ငွေဆုံးရှုံး ရခြင်း ၄။ လင်္ကျာနဖူး ။ ။ ရုတ်တရက်ခရီးထွက်ရခြင်း ၅။ လက်ဝဲနဖူး ။ ။ မျှော်လင့်ချက်များ ပြည့်စုံအောင်မြင်ခြင်း ၆။ လင်္ကျာမျက်ခုံး ။ ။ ဥစ္စာစီးပွါးငွေကြေးရရှိခြင်း ၇။ လက်ဝဲ ။ ။ ငယ်ရွယ်သူတို့ရောက်ရှိလာခြင်း ပူပန်ရခြင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ သားသမီးရမည့် လက္ခဏာဖြစ်ခြင်း ၈။ မျက်ခုံးအလယ်ဗဟို ။ ။ […]
အိုးချင်းထားတော့ အိုးချင်းထိ – ကြိုးချင်းထားတော့ ကြိုးချင်းငြိ အတာအိုးကလေး နှစ်လုံးကို တစ်လုံးတွင် ရွှေရောင် သုတ်ရ၏။နောက်တစ်လုံးကို ငွေရောင် သုတ်ရ၏။ ရွှေရောင် အိုးလေးတွင် ယောက်ျားလေး၏ ဓာတ်ပုံကို ကပ်ရ၏။ငွေရောင် အိုးကလေးတွင်မူ မိန်းကလေး၏ ဓာတ်ပုံကို ကပ်ရ၏။ ထို့နောက် ယောက်ျားလေး၏ ရွှေရောင် အိုးလေးထဲတွင် သူ၏ မွေးနံပန်းများကို ဂြိုဟ်သက်အလိုက် ထည့်ရ၏။မိန်းကလေး၏ ငွေရောင် အိုးကလေးထဲတွင် လည်း မိန်းကလေး၏ မွေးနံပန်းများကို ထည့်ရ၏။မွေးနံပန်းများကို သိစေချင် သောကြောင့် အောက်တွင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ၏။ မွေးနံပန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်၏။ တနင်္ဂနွေသားသမီးအတွက်- အုန်း(၆)ညွန့်။ တနင်္လာသားသမီးအတွက်- ကံ့ကော်(သို့)ခရေ (၁၅)ညွန့်။ အင်္ဂါသားသမီးအတွက်-ဇီး(သို့)ဇော်စိမ်း(၈)ညွန့်။ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးအတွက်-ရွက်လှ(၁၇)ညွန့်။ ကြာသပတေးသားသမီးအတွက်-မေမြို့ပန်း(၁၉)ပွင့်။ သောကြာသားသမီးအတွက်-သပြေပန်း(၂၁)ညွန့်။ စနေသားသမီးအတွက်-နှင်းဆီပန်း(၁၀)ပွင့်။ ပြီးရင် စားပွဲတစ်လုံးပေါ်မှာ အဲဒီအိုးနှစ်လုံးကို […]
ချစ်ရတဲ့သူတွေ တစ်ယောက်ထက်မက တွေ့ရကောင်း တွေ့ရနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် တစ်ကယ်စစ်မှန်တဲ့ ချစ်သူကိုတော့ ဘယ်အချိန်မှာ တွေ့ရမလဲဆိုတာ ဘယ်အရွယ်ရောက်ရင် အချစ်စစ်နဲ့ တွေ့မှာလဲ အချစ်စစ် ဆိုတာ လူတိုင်းလိုချင်ကြတဲ့ အရာပါ လူတိုင်းလူတိုင်း မက်မောကြပေမယ့် လက်တွေ့ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဘဝတစ်သက်တာမှာ ချစ်ရတဲ့သူတွေ တစ်ယောက်ထက်မက တွေ့ရကောင်း တွေ့ရနိုင်ပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် တစ်ကယ်စစ်မှန်တဲ့ ချစ်သူကိုတော့ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ တွေ့ရမလဲဆိုတာ မသေချာတဲ့အရာပါ။ Marry ရဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက်တော့ ဘယ်အချိန်မှာ အချစ်စစ်နဲ့ တွေ့ရမလဲ ဆိုတဲ့ အချစ်ဗေဒင်လေး တွက်ပေးချင်ပါတယ်။ အချစ်ဗေဒင်လေး တွက်ပေးချင်ပါတယ် မိဿရာသီဖွား – မတ်(၂၁)မှ ဧပြီ(၂၀) အတွင်း မွေးသောသူများ မိဿရာသီဖွားတွေက အသက် […]
သူများတွေ လက်ထပ်ပွဲတွေပျော်ပျော်ကြီး ဆင်နွှဲနေချိန်မှာ ရည်းစားတစ်ယောက်ထားဖို့ကိုတောင် ဝန်လေးနေတတ်တဲ့ ချစ်ရမှာကြောက်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ တချို့ကျတော့ လက်ထပ်ရမှာ၊ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်လို့ မလွတ်လပ်တော့မှာကို တွေးပူပြီး လက်ထပ်ရမှာကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ လက်ထပ်ရမှာကို စိတ်ကူးထဲမှာတောင် တွေးလို့မရလောက်အောင် ကြောက်ကြသူတွေကတော့ သူတို့လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1. Leo ( July 22 – Aug 22) သိဟ်ရာသီဖွားတွေက လက်ထပ်ဖို့ကို အကြောင်းမဲ့ကြောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့တွေဟာ ချစ်သူအပေါ်ဂရုစိုက်ချစ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ စစချင်းချစ်သူဖြစ်စအချိန်တွေမှာ အိပ်ရာထတဲ့အချိန်ကနေ၊ ညအိပ်တဲ့အချိန်ထိ ချစ်သူဆီပဲစိတ်ရောက်နေတဲ့အထိ အစွဲအလမ်းကြီးတဲ့သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ တစ်ဖက်လူရဲ့ အပြုအမူတချို့ကိုသည်းမခံနိုင်တော့တာမျိုး၊ သူတို့ကိုစိတ်ပျက်အောင်လုပ်နေတယ်လို့မြင်လာတာမျိုး၊ သူတို့ကပဲ တစ်ဖက်သတ်ပေးဆပ်ချစ်နေရတယ်လို့ ထင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ တစ်ဖက်လူကိုစိတ်ပျက်လာပြီး၊ အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ပျက်လာတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မနှစ်မြို့သလိုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီတော့ ချစ်သူဘဝမှာတောင် ဒီလိုဖြစ်နေရင် ၊ လက်ထပ်ပြီးလို့ ဒီလိုဖြစ်ရင် ဒုက္ခပဲဆိုပြီး […]
No (1) အမျိုးအစား နံပါတ် (1) ပုံထဲကလို ဘယ်လက်ရဲ့ နှလုံးလမ်းကြောင်းက မြင့်ပီး ညာလက် နှလုံးလမ်းကြောင်း က နိမ့်နေသူတွေကတော့ သတ္တိ ရှိတယ်၊ ထက်မြတ်တယ် ။ စိန်ခေါ်မှု တွေကိုလည်း ချက်ချင်း ရင်ဆိုင်နိုင်သူတွေ ပဲဖြစ်ပါတယ် …။အချစ်ရေး မှာလည်း အစွဲအလန်းကြီးတဲ့ သူတွေဖြစ်ပီး ငယ်ရွယ်တဲ့ ကောင်လေး ချောချော ကောင်မလေးချောချော တွေနဲ့ ဖူးစာ ဆုံတတ်သူများ ဖြစ်ပါတယ် …။ No (2) အမျိုးအစား ပုံပါအတိုင်း ဘယ်ဘက် လက်ဝါး ရဲ့ နှလုံးလမ်းကြောင်းနဲ့ ညာဘက်လက်ဝါးရဲ့ နှလုံးလမ်းကြောင်း နှစ်ခုဟာ ညီညာပီး ထိဆက်နေတယ် ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ စိတ်ခံစားမှုထက် အသိတရားကို ဦးစားပေးသူ တစ်ယောက် […]
Choosingaprofession is definitelyatechnical task and requiresalot of focus and determination in order to be successful at picking the right career. If it goes wrong, your upcoming life will be inahuge mess. Also, the career should not only earn you money. Rather it should provide you complete satisfaction. […]